Intel inosvitsa chigadzirwa chitsva kuti censor inogumbura mutauro | Linux Vakapindwa muropa
Intel inounza chigadzirwa chitsva kuti censor inogumbura mutauro
Intel, iyo hofori yeSilicon Valley, inozivikanwa nema microprocessors uye netsiva dzakaipisisa, yakazivisa uyeKuvhurwa kwechirongwa cheArtificial Intelligence chinonzi Kurara. Kurara kunoratidzika kunge kuchikwanisa kuongorora rusaruro uye "inosemesa" kutaura kubva mumutambo odhiyo. Intel inoti iyo AI chishandiso inobvumidza vashandisi kuti vaone uye kubvisa mutauro une chepfu kubva munhaurwa yavo yezwi. "
1 Intel Inosvitsa Nyowani Chigadzirwa Asi Zvichava Zvakanaka?
Intel Inosvitsa Nyowani Chigadzirwa Asi Zvichava Zvakanaka?
Kurara, kuchapa vashandisi chiyero chinotsvedza chekutaura kwekuvenga. Iyi purogiramu ichiri muchikamu chekusimudzira uye inogona kuvhurwa imwe nguva mu2020.
Inyanzvi nyowani Ichabatanidzwa mune yeodhiyo system yeIntel desktop uye laptop makomputa. Chikonzero chikuru (sekunge Intel haina kutipa zvakakwana, kutenga zvigadzirwa zve AMD)
Sezvo zvinogona kuonekwa mumharidzo, software inosanganisira chiyero chinotsvedza kuti uone kana mushandisi achida kunzwa "hapana", "vamwe", "zvakanyanya" kana "zvese" kutaura kunowira muchikamu chemutauro unogumbura, kusanganisira kugona, kunyadzisa muviri, hasha, LGBTQ + ruvengo, misogyny, kudaidza zita, rusaruraganda, xenophobia, mutauro unoreva bonde, kutuka, chena nyika, uye mutserendende unotara kuti kangani iwe mushandisi waunoda kunzwa «N-Shoko»
Kana kusvika parizvino wakave nemufaro wekusamhanyira kune mumwe munhu anoshandisa izwi rokuti kugona, zvinoita sekusarura mukufarira vanhu vasina hurema. Ndokunge, kukuvadza vakaremara kuitira kubatsira avo vasina. Hongu, ndakashamawo zvakare.
N-izwi rinoreva izwi rekuti nigger, chirevo icho vanhu vemuAfrica vanofunga nezvekuzvidza kana chishandiswa nemunhu asiri wemuAmerican American.
Sekureva kwaKim Pallister, CEO weIntel's Gaming Solutions timu, basa rekutsvedza rakagadzirwa kuti rienderane nemamiriro akasiyana. Pallister akaenzanisira kuti vashandisi vangangoda mamwe marevhuru ezwi mazwi kana vachitamba neshamwari, kana mimwe mitambo ingasanganisira inonyangadza -mutambo odhiyo iyo vashandisi vachiri kuda kunzwa.
Ini handisi kutamba mitambo yepamhepo, asi kana ndikadaro, ndinenge ndiri pakati pevanhu vasingade komputa yavo ichivaudza zvekuterera.
Nekudaro, Intel yakaburitsa pachena kuti ivo havafarire mumaonero angu.
Marcus Kennedy, Managing Director weEsports neMitambo Chikamu cheIntel's Customer Computing Group, yakati:
Ini ndinofunga zvaizove zvisina maturo kuenda munzvimbo ino kuyedza kuita chimwe chinhu pano dai tanga tisingatarisire chero mhando yenhaurirano. Isu takanyatsotarisira kuti izvi zvinounza chimwe chinhu, asi kubva pamaonero edu, chinhu chaicho chekuita kuramba takanamatira mukupihwa simba kwemutambi uye isu tichamutsigira kunyangwe kurambwa kwatingaite.
Kana iyo nzira inoenda kugehena yakavezwa nevavariro yakanaka, zvirokwazvo madziro ayo akafukidzwa nezvidzidzo zveNGOS zvinotsigira izvozvo. Izvi zvisina maturo kubva kuIntel hazvisi izvo.
Chidzidzo che2020 neAnti-Defamation League chakaratidza izvo 81% yevakuru veAmerica pakati pemakore gumi nemasere kusvika makumi mana nemashanu vanotamba mitambo yevatambi vakawanda pamhepo vakasangana neimwe nzira yekushusha. Makambani ekubhejera akakumbirwa kuti aite zvakawanda kugadzirisa kushungurudzwa uye kusarura pamapuratifomu avo, kunyanya tichifunga nezvechangobva kuitika kurwira kururamisira. Pamusoro pekuedza kwaIntel, vhidhiyo yemitambo yekutenderera sevhisi Twitch yakazivisa Chitatu kuti kambani ichachinja mutemo wayo nezvekushungurudzwa kutora matanho kune vashandisi vanoita "kusazvibata kwakakomba," kunyangwe zviito izvi zvikaitika-pasiti.
Asi zvirinani kune vanhu vane njere. Chimwe chidzidzo chakaburitswa muna Kubvumbi 2020, mune iyi nyaya neNational Academy yeSainzi, chakaona kuti zvirongwa zvinoverengeka zvekuziva kutaura "zvakaratidza kusiyana kukuru kwerudzi.»Uye yaive nekanganiso yekukwira zvakanyanya kune vatauri vatema zvichienzaniswa nevachena.
Asi zorora, kudzivisa izvi kambani yakavimbisa kuti "software iri kuvakwa nechikwata chakasiyana"
Ndingadai ndakasarudza rinokwanisa timu, asi zvinoita sekunge nhasi kusiyanisa ndiyo mhinduro kune zvese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Intel inounza chigadzirwa chitsva kuti censor inogumbura mutauro
FSF inopa tsananguro pamusoro pesarudzo yaRichard Stallman